Mogadishu Journal » Klopp ayaa isha ku haya abaal marinta
Jurgen Klopp ayaa ku adkeystay fikirka 350-kulan maadaama uusan maamulaha Liverpool maskaxdiisa geli doonin marka uu gaaro calaamadda kulanka Reds ee Brentford.
Klopp ayaa ku riyaaqay guulo waaweyn tan iyo markii uu la wareegay 2015, isagoo gaaray labo final oo Champions League ah islamarkaana uu ku guuleystay tartanka 2019 ka hor inta uusan Liverpool ku hogaaminin koobkoodii ugu horeeyay ee Premier League sanad kadib.
Si kastaba ha ahaatee, Liverpool ayaa kulanka axada la ciyaari doonta kooxda Bees 11 dhibcood ka hooseysa hogaamiyayaasha horyaalka ee Manchester City, waxaana lugtii hore ee semi-finalka EFL Cup ay barbaro 0-0 ah la gashay Arsenal.
Mar wax laga waydiiyay rajada ah in aan gaarno ciyaarta 350, Klopp ayaa u sheegay shirkiisa jaraa’id ee ka horeeyay kulanka: “Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay oo aan ku faanayaa waxyaalihii aan halkan ku gaarnay ilaa hadda, laakiin uma malaynayo hal ilbiriqsi oo ku saabsan.
"Kaliya kulanka soo socda ayaa ah mid aad u muhiim ah marka aad tahay tababaraha kooxdan, dhammaan tartamada, qof walba, nafteena ku lug leh, waxaan rajeyneynaa inaan badino kulanka soo socda, taasina waa shaqada.
“Laakiin way fiican tahay, waxaan haysanaa koox fiican, ciyaartoy heer sare ah, runtii aad ayaan ugu faraxsanahay wakhtiga aan halkan ku haysanay ilaa haatan, waxaana rajeynayaa inaan ku raaxaysan doono sanadaha soo socda.
"Tirooyinkani muhiim iima aha, laakiin 350 waa mid fiican, way ka fiican tahay 15 iyo ka baxsan."
Guuldarro la’aan seddexdii kulan ee ugu dambeysay Premier League iyo Mohamed Salah iyo Sadio Mane oo ay ku tartamayaan Koobka Qaramada Afrika, Liverpool waxay aragtay Virgil van Dijk, Andrew Robertson iyo James Milner oo dhaawacyo ka soo gaareen Arsenal.
Si kastaba ha ahaatee, dhammaan saddexdan ayaa diyaar u ah inay wajahaan kooxda Brentford oo Liverpool ku qabatay barbardhac 3-3 ah ciyaar ka dhacday London bishii September.
“Sida aan ogahay, ma jiraan dhaawacyo cusub oo dhab ah,” Klopp ayaa hadalkiisa raaciyay. “Kulankii xalay, Virg, Robbo, Milly, laakiin si toos ah ciyaarta ka dib, kooxda caafimaadka ayaa sheegay in dhammaan ay wanaagsan yihiin.
"Waan arki doonaa, ma jiraan 'dhaawac' ilaa hadda."
Koobkii ay la ciyaareen 10-ka ciyaaryahan ee Gunners waxa ay Liverpool kor u kacday boqolkiiba 78.1 iyo 17 isku day oo ay Arsenal ku samaysay seddexda gool, laakiin kaliya hal dadaal ayaa ku dhacay bartilmaameedka.